देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बीरगन्जको विकास जरूरी : उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद - Nepal Post Daily
देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बीरगन्जको विकास जरूरी : उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद
२०७० सालमा नेपालका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धतासहित १२ बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् सदस्य डाक्टर बाबुराम भट्टराई पाँचजना व्यक्ति अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील छन् । तर पनि नेपालको आर्थिक विकासका साथै बीरगन्जको समग्र विकासको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने बीरगन्जसहित समग्र देशको आर्थिक विकासको अवस्था, समस्या र समाधान तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा केन्द्रित रहेर बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैदसँगको कुराकानीको सार :
बीरगन्जलाई नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार भनिन्छ । गेट वे अफ नेपाल बीरगन्जको विकासक्रम र अहिलेसम्मको विकासको अवस्थालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
बीरगन्ज, प्रमुख प्रवेशद्वार मात्रै होइन, लाइफलाइन र ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि हो । बीरगन्जको जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले विकास हुन सकेको छैन । बीरगन्जको विकासका लागि हामीले बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमार्फत अन्य विभिन्न संघसंस्थामार्फत पनि धेरै पटक विभिन्न निकायहरूमा कुरा उठाउँदै आउँदै छौं । यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि बीरगन्जको विकासका लागि खासै भूमिका खेल्न सकेको जस्तो लाग्दैन । नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी बीरगन्ज महानगरपालिका भएपछि जुन विकास हुनुपर्ने हो, त्यो विकास देख्न पाएको छैन । वास्तवमा अहिले जति बीरगन्ज र यस आसपासमा देखिएका विकासहरू छन्, त्यो सबै भौगोलिक कारणले आएको विकास हो । भौगोलिक कारणले ड्राईपोर्टको विकास भयो, आईसीपीको विकास भयो । व्यापारिक मार्गको विकास भयो । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयो । त्यही सेरोफेरोमा हामीले विगतमा ग्रेटर बीरगन्जको अवधारणा पनि ल्यायौं, त्यसपछि २०७० सालमा म उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर १२ बुँदे सहमति पनि गराइयो । त्यसमा पनि ग्रेटर बीरगन्ज, औद्योगिक करिडोरको नाला निकासको समस्यालगायतका मुद्दाहरू उठायौं । हरेक देशमा आफ्नो आर्थिक राजधानीजस्तै भारतमा मुम्बई, चीनमा संघाई, बेलायतमा मेन्चेस्टर छ । त्यो हिसाबले बीरगन्ज आर्थिक राजधानी हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म मौखिक रूपमा मात्रै आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको छ । त्यसको लिखित रूपमा घोषणा हुन सकेको छैन । बीरगन्जलाई लिखित रूपमा नै आर्थिक राजधानी घोषणा गरिएमा यहाँको विकास स्वाभाविक रूपले अझ बढ्ने थियो । यो बजेटमा पनि राजस्व परामर्श समितिको छलफलमा विशेष प्याकेज राख्न सुझाव दिएका छौं । सबैभन्दा बढी समस्या बीरगन्जले भोग्दै आएको छ ।
बीरगन्जलाई राज्यले उपेक्षा किन गर्छ ? राज्यले बीरगन्जलाई यति उपेक्षा गर्नुको कारण के हो ?
यसको जवाफ भन्न सक्दिनँ, तर राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको अनुभवचाहिँ हुन्छ । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू यहाँबाट नै सुरु भयो । यहीं गरिएको आन्दोलनबाट धेरै व्यक्तिहरू राजनीतिक शिखरमा पनि पुगे, तर खै किन हो बीरगन्जलाई कसैले पनि सम्झिएन । हामीले बारा, पर्साका सांसदहरूको समूह सांसद क्लब पनि गठन गरेका थियौं । बारा, पर्साका सबै सभासदहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई ‘फरक–फरक पार्टीका फरक–फरक विचार र सिद्धान्त होला तर विकासका लागि एक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँहरू पनि सहमत भएर तीनबुँदे सहमति पनि बनेको थियो । बीरगन्जको विकासका लागि आवाज उठाउनुहोस् भनियो । हुन त अहिले केही सांसदहरूले कुरा त उठाउनुभएको छ, तर विकासमा परिवर्तन भने खासै भएको देखिँदैन । हरेक व्यावसायिक सहरमा ट्रान्सपोर्ट नगरी हुनुपर्ने हो । त्यो हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आयौं, तर अहिलेसम्म त्यो छैन । पर्सा, बारामा रहेका उद्योगहरूको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न भनेका छौं । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । औद्योगिक ढलनाला निकास, सिर्सिया नदीको प्रदूषण समस्या देखिएको छ । भारतमा पनि यसको आन्दोलन उठिरहेको छ । सरकारले कमसेकम यो बजेटमा विशेष प्याकेज नै दिएर बीरगन्जको विकास गर्नुपर्छ । मुख्य नाका हो । नेपालको लाइफलाइन भन्छौं, त्यही हिसाबले विकास हुनुपर्छ । बीरगन्जको विकास भएमात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ ।
तपाईं बीरगन्ज महानगरपालिकाको सद्भावना दूत, नेपाल–भारत सहयोग मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेपालको राजनीतिक उतारचढावले दुई देशबीच प्रभाव पार्न सक्ला, तर व्यापार–व्यवसायमा यसको असर कस्तो रहेको छ ?
जापान र श्रीलंकाका राजदूतहरूलाई पनि बीरगन्जमा बोलाएर यहाँको विकासका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । सरकारका तर्फबाट यसलाई कसरी लिएको पाउनुभएको छ ?
म बीरगन्ज महानगरपालिकाको सद्भावनादूत भएपछि जापान र श्रीलंकाका राजदूतहरूलाई दुई–दुई पटक बीरगन्ज बोलाएर छलफल गरेँ । भारतीय राजदूतहरू पनि आएका छन् । यहाँका पर्यटन विकास, औद्योगिक विकासलगायतका विषयमा बृहत् रूपमा छलफलहरू भएको छ । उहाँहरू लगानी गर्न पनि तयार हुनुुहुन्छ । तर, हामी राज्यको कानुनको दायरामा रहेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने काम सरकार र राज्यको दायित्व हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने पहलले मात्रै परिणाम आउन सक्दैन । यसमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । जबसम्म राज्यले विश्वसनीय आधार बनाउन सक्दैन तबसम्म यहाँ विदेशी लगानीहरू पनि आउने सम्भावना कम रहन्छ । यो सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
Previous articleभारततर्फ लैजाँदै गरेको १८ किलो गाँजा प्रहरीद्वारा बरामद
Next articleभारतीय राष्ट्रपति अस्पताल भर्ना